आज बाट प्रदर्शन हुदै दुई चलचित्र "साइँली" र "शुभ लभ" - Ruru FM
आज बाट प्रदर्शन हुदै दुई चलचित्र “साइँली” र “शुभ लभ”
On १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०४:३५
गएको केही महिनायता आश गरिएका र ठूला स्टारका फिल्मले समेत हलमा अपेक्षाकृत व्यापार गर्न सकिरहेका छैनन् । यसबीच, यस हप्ताका लागि शुक्रवारबाट दुई फिल्म ‘साइँली’ र ‘शुभ लभ’ एकसाथ प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । खडेरी लागेको नेपाली फिल्मको व्यापार यी दुई फिल्मले केही हदसम्म भए पनि चलायमान बनाउने विश्वास फिल्मकर्मीमा छ । दुई फिल्मको प्रतिक्षा दर्शकलाई लामो समयदेखि थियो ।
गायक हेमन्त रानाद्वारा स्वरबद्ध चर्चित गीत ‘साइँली’ नाम सापटी लिएर निर्माण गरिएको फिल्मलाई ‘कबड्डी’ फेम्ड निर्देशक रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेका हुन् । उनी माटो सुहाउँदो फिल्म बनाउने निर्देशकको रुपमा परिचित छन् । उनका फिल्म प्रायः समाज केन्द्रित हुन्छन् । यसकारण पनि फिल्म हेरिरहँदा धेरैले आफ्नै कथा महशुस गर्दछन् । ‘कबड्डी’ सिरिजलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । परिवारलाई खुसी दिन परदेशिएका श्रीमान र उनलाई गाउँमा कुरेर बसेकी श्रीमतीबीचको मार्मिक कथा ‘साइँली’ गीतमा उठाइएको थियो । फिल्मले पनि देशको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बैदेशिक रोजगारीकै कथा भनेको छ । एउटा युवक कसरी धन कमाउनका लागि विदेशिन बाध्य हुन्छ ? भन्ने फिल्ममा देखाइएको छ । फिल्मको ट्रेलरले नै धेरैको ध्यान खिचेको थियो । अब हलमा दर्शक तान्न कति सफल हुन्छ ? हेर्न बाँकी छ ।
फिल्मप्रति दर्शकको चासोलाई मध्यनजर गर्दै मल्टीप्लक्सहरुले फिल्मलाई उच्च सोज प्रदान गरेका छन् । सिंगल स्क्रिन पनि फिल्मले प्रयाप्त पाएको छ । फिल्मको इनिसियल बक्सअफिस आक्रामक हुने विश्वास फिल्म पण्डितहरुको छ । यसमा ‘साइँली’ गीतको भिडियोमा अभिनय गरेर आम दर्शकमाझ चिनाएका गौरव पहारी र मेनुका प्रधान नै लिड रोलमा छन् । अभिनेता दयाहाङ राईको पनि यसमा अभिनय छ ।
यसलाई गायक हेमन्त राना र अभिनेता गौरव पहारीले मिलेर निर्माण गरेका हुन् । माओत्से गुरुङ, प्रकाश घिमिरे, अरुण कार्कीलगायतका कलाकारको पनि अभिनय रहेको यस फिल्मबाट केनिपा सिंहले डेब्यू गरेकी छन् । यसमा विशाल गुरुङ र मोहन राना मगर निर्मातामा छन् । फिल्मका कार्यकारी निर्माता मणिराम पोखरेल हुन् । शैलेन्द्र डि कार्कीको छायांकन रहेको छ ।
यस्तै, फिल्म ‘शुभ लभ’ बाट चर्चित युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारीले अभिनय यात्राको शुभारम्भ गरेका छन् । धेरैको चिना र हात हेरेर खरर भाग्य बताएका उनले आफ्नो फिल्म करिअरको भाग्य चाहिँ हेरेका छन् वा छैनन् ? आजबाट थाहा हुनेछ । फिल्म सफल भएको खण्डमा उनीप्रतिको विश्वास थप बलियो हुनेमा दुईमत छैन । असफल भए उनलाई गर्ने विश्वासमा कमी नआउला भन्न सकिन्न ।
फिल्मलाई सन्तोष बाबु लोहनीले निर्देशन गरेका हुन् । यसमा हरिहरले नव अभिनेत्री क्रिस्टिन पौडेलसँग रोमान्स गरेका छन् । फिल्ममा उनी रियलझैँ ज्योतिषकै भूमिकामा छन् । फिल्मका प्रस्तुतकर्ता प्रदीप कुमार उदय हुन् भने धर्मराज शर्मा सुवेदीको लगानी छ । उक्त फिल्ममा डाक्टर सुर्या थापा, सरोज खनाल, राजाराम पौडेल, राजा राजेन्द्र पोखरेल, रविन्द्र झा, प्रदीप बास्तोलालगायतका कलाकारको पनि अभिनय छ ।
सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिर्वतन गर्ने निर्णय
गुल्मीमा सेना दिवसको अबसरमा मैत्रीपूर्ण फुटवल
रुरुक्षेत्र गाउँपालिका गुल्मीमा अन्तर निमाबि नृत्य प्रतियोगिता सम्पन्न